Brezila: Mananontanona ny ady an-trano noho ny tanin’ny Indizeny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2008 15:58 GMT
Raha mankalaza ny zon'ny vahoaka indizeny izao tontolo izao mandritra ity andron'ny vahoaka indizeny ity dia ambavahoanan'ny ady antrano noho ny resaka ady tany kosa ny ao Brezila. Adintany nitoetra hatry ny ela teo amin'ny mpamboly vary sy ny foko indizeny any Roraima, fanjakana any avaratra atsinanana manamorona an'i Guyana sy Venezuela, nivadika ho gidragidra, niteraka horohoro sy fifanafihana matetika izay mety hivadika ho ady manerana ny firenena mihitsy aza.
Lahatsary iray avy amin'ny Filankevitra Indizenin'i Roraima (CIR) sy ny ONG Survival International no mampiseho antsika olona mitondra basy nokaramain'ny mpamboly vaventy ao an-toerana sady mpanao politika Paulo César Quartiero hanafika ny tanàna Indizeny Makuxi iray.
Fampitandremana: Ity lahatsary ity dia miaty herisetra sy ratra izay mety hanohintohina ny mpijery. (jereo ny lahatsoratra nadika)
Heverina ho 18 000 eo ho eo ny isan'ny vahoaka indizeny avy amin'ny foko Ingarico, Macuxi, Patamona, Taurpeng ary Wapixana izay monina amin'ny faritra antsoina hoe Serra Raposa do Sol. Nampitombo ny disadisa tamin'ny taona 2005 ny nanasoniavan'ny fitondrana ny hanekena ny faritry ny Raposa Do Sol ankehitriny izay mahatratra 4 200 000 acre (1 acre = 4047 metatra toradroa) ho valanjavaboary. Nanamarika ihany koa ny didy hitsivolana fa anjaran'ny Tafika sy ny polisy federaly no miandraikitra ny fiarovana io faritra io. Nanomboka tamin'io fotoana io dia nandao ny faritra ny ankamaroan'ny mpiompy sy ny mpamboly vary rehefa nahazo onitra avy amin'ny goverinemanta.
Na izany aza dia te-hiady hevitra ny mitaky ny hampihenana io velarantany io ny goverinemantan'ny firenen'i Roraima (Brezila) izay milaza fa efa eo ampelatanan'ny Indiana ny 46 isanjaton'ny velaratanin'i Roraima, ka ny fanitarana io valanjavaboarin'ny Indizeny io dia ho vato misakana ny fampandrosoana ny firenena. Efa ampolony taona no niainan'ny voanjo tamin'ny tany sy namboleny azy, hatramin'ny namenoan'ny andian'ny voanjo voalohany ny tanin'ny indizeny mbola tsy voasoratry ny Indizeny tany amin'ny fanjakana ny taniny. Koa na nisy aza ny fanaovan-tsonia taty aoriana dia mbola misy ny vondrona kely tsy manaiky hiala amin'ny tany ary mametraka fa 1% na latsaka aza amin'ny tany (voafaritra ho valanjavaboary na tany arovana tsy hokasikasihina no marina kokoa) no ampiasainy. Niato ny fikasana hanalana azy ireo rehefa vaky ny herisetra tamin'ny Avirily 2008.
Volana aogositry ny alahelo
Efa manome tombondahiny ny vahoaka indizeny ny goverinemanta, saingy hatramin'ny nanombohan'ny gidragidra dia voatsikeran'ny vondron'olona maro, hatramin'ny mpitari-tafika izany politika izany. Eo ampelatanan'ny Fitsarana Tampony Breziliana ankehitriny ny raharaha, izay heverina hamoaka ny didy amin'ity volana ity raha ho esorina amin'ny toerana misy azy ihany ny mpamboly vary na atsahatra ny fampiharana ny mahatanin'ny Indizeny ny Raposa Serra do Sol. Ahiana manko fa raha manome rariny ny mpamboly vary ny Fitsarana Tampony dia ho fanombohan-javatra hiteraka famerenana ady any amin'ny fitsarana ihany koa ny tany efa nekena fa tanin'ny indizeny hafa.
Misara-kevitra ny mpamaham-bolongana Breziliana manoloana ity raharaha ity. bloggers have divided opinions on the matter. Nanao fitsapa-kevitra an-tserasera amin'izay antenaina hodidian'ny Fitsarana Tampony ny Filohan'ny Fifanampiana Indiana nasionaly teo aloha (FUNAI), Mércio Pereira Gomes [pt]. Amin'izao fotoana izao moa dia 253 no efa nifidy ka ny 34% mieritreritra fa hotazonin'ny fitsarana ny faneken'ny filoha Lula tamin'ny taona 2005 momba ny tany, raha 39% kosa no mino fa haverina ny famaritana (ho kelikely kokoa) indray ny tany:
Efa tena mitaintaina tokoa ny rehetra amin'izay havoakan'ny STF [Fitsarana Tampony Breziliana]. Jereo fotsiny ny vokatry ny fanadihadiana etsy ankilan'[ny bolongana]. Mifanasaka mihitsy ireo mino ny fitazonana ny velarantany ankehitriny sy ny mihevitra fa hisy fanitsiana io famaritana ny tanin'ny Raposa Serra do Sol. Ankehitriny dia misy adihevitra miaraka amin'ny mpahalala momba ny olona, ny mpitsara Dalmo Dallari eny fa na dia ny Goverinoran'i Roraima momba ny Raposa Serra do Sol ao amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana handresy lahatra ny Minisitra izay, efa manana ny safidiny, araka ny fijeriny.
Tahaka ny efa mahalala mialoha ny didy hivoaka i Aldenor Jr [pt] ary manahy fa mbola hihamafy ny herisetra:
Raha mbola tsy manana fanapahakevitra matotra farany ny minisitra dia efa miomana ho amin'ny ady kosa ny mpibodo tanimpanjakana ampirisihan'ny mpamboly vary vitsivitsy. Efa re siosio fa nandritra ny herinandro vitsivitsy izay dia maro ny fitaovam-piadiana, basy, eny fa na dia mpikarama an'ady aza niditra tany amin'ny faritra ary maka toerana manodidina ny tanàna manakaiky ny Macuxi. Mety hipoaka hatrany ary tsy ho voafehy noho izany ny ady.
Tsy nijanona mihitsy ny fanerena ankolaka ataon'ny mpanao politika fantatra amin'ny fitadiavan-tombotsoa mihoa-pampana mandritra ny fotoam-pisintonan'ny fitsarana mitady ny handravana ny maha an'ny indizeny ny tany, ka miteraka fanantenana matanjaka (tsy mikivilavila) amin'izay hivoaka avy ao amin'ny Lapa(n'ny Fitsarana). Hisy ve ny fotoana hampivadika izany fironana izany?
Amin'ny lafiny iray dia mino i José Correa Leite [pt] fa didy iray ihany no azo heverina hivoaka (possible). Raha hafa io didy io dia hita manomboka eo hoe mankaiza ny fironan'i Brezila:
Tsy mihoatra ny 400 000 ny isan'ny mponina ao Roraima. Ho an'ny mponina tsy Indiana eo ho eo amin'ny 350 000 eo dia tany manakaiky ny 11 000 000ha vonona ho azy, araka ny fanadihadian'ny ivotoerana Misahana ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana. Ampitahao amin'i Pernambuco izay manana tany 9 800 000ha ho an'ny mponina manodidina ny 8 000 000 izany.
Nahazo fandraisana anjara mavitrika avy amin'ny fokonolona Indizeny hatrany ny fiarovana ny sisintanintsika manamorona an'i Amazona. Ohatra, nampidirina ho ao amin'ny tafika ny tanorany hanao ny asa tsy tian'ny hafa na tsy zakan'ny hafa.
Noho izany, tsy misy antony mitombina, na fiarovana sosialy na antony hafa, anesorana ny indizeny amin'ny tanin'ny Raposa Serra do Sol. Manamarika ny fanantanterahana ny teny ifanomezana nataon'ny fanjakana mandrakariva, eo amin'ny fiarovana ny fototry ny kolontsaintsika sy nyadidiny ho amin'ny fiarovana izany, ny Didy avoakan'ny Fitsarana Tampony na ho inona izany na ho inona, eny fa na dia mety hifanohitra amin'ny tombotsoa maro izany ary mety hiteraka tsy fifankahazoankevitra vetivety aza izany.
Ny andaniny kosa
Amin'ny andian-dahatsoratra lava no hanavazavan'i Adelson Elias Vasconcellos [pt] ny antony tokony amerenan'ny goverinemanta indray (na ijerena indray) “araka izayhaingana indrindra” ny fepetra nahatonga ny fanekena tamin'ny 2005 amin'ny famaritana ny tany voaron'ny Raposa do Sol:
Ny tena nandrava zavatra dia ny nanasoniavan'i Lula tamin'ny 2005 ny Fanambarana ny zon'ny vahoaka indizeny izay, raha eken'ny Kongiresy ity Fifanarahana ity, hampidirina amin'ny lalampanorenanan Breziliana, ka manomboka amin'io fotoana io dia mety hanambara ny fahaleovantenany amin'i Brezila avokoa ny foko na vondrona Indizeny rehetra. Raha jerena ny isa ankehitriny dia mety hiteraka firenena 216 vaovao sy fahaverezan'ny velaratanintsika mahatratra 13% izany, ary ny 90%n'izany tany izany dia any Amazonia avokoa. Takatrao ve ny mahaliana fatratra ny vahiny ny hanekena ny tany ho an'ny Indizeny?
Mitovy hevitra amin'izany ihany koa i Fernando Rizzolo [pt]:
Ny tsy mahalala jeogirafia, ny fetsifetsy na olona tsy mahalala na inona na inona ihany no mandry ampiadanana mamela ny sisintanintsika hisokatra amina faritra mampididoza, ary tsy mila lazaina akory hoe nahoana izany.
Bob Back [pt] koa mino fa mbola misy ambadika mihoatra noho ny zon'ny indizeny ity raharaha ity:
Efa lasa kendrikendren'ny tombotsoa vahiny, mpihady tany eny fa na dia ny goverinemanta aza ny faritra manantena fa sao dia mahazo sombitany amin'i Brezila. Misy aza ONG miasa tsy fantatra hoe ho amin'ny tombotsoan'iza.
Raha avadika ny sarintanin'i Brezila dia tahaka ny mahita fen'henankisoa goavana izay tsiriritin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena hakana kely ihany koa amin'ny fampanantenana ny Indiana fa hahaleo tena amin'i Brezila ry zareo.
Noho io antony io, dia tokony holazaina fa any amin'ny toerana misy fahefana ihany no misy fiandrianam-pirenena. Efa lasa tany efitra tsy misy olona amin'ny lahatsary western ireny ny tany arovana Raposa do Sol.
Mandrapipoitran'ny sheriff hanadio ny trano sy hiteny izay antony hahatongavany…
Adihevitra sy fanetsiketsehana
Altino Machado [pt], miaraka amin'ny vondrona Makunaima Grita, no iray amin'ireo mpamaham-bolongana maro manentana ny fanangonantsonia an-tserasera ho fanohanana ny vahoaka indizeny ao Raposa Serra do Sol, izay efa voasonian'olona mihoatra ny 2000 ary tokony halefa any amin'ny Fitsarana Tampony Breziliana alohan'ny 27 Aogositra, daty anapahan-kevitra ny amin'ny tany:
Ambaranay indray fa amin'ity fanangonan-tsonia ity fa feno 20 taona amin'ny volana Oktobra ny Lalampanorenana ary tokony hajaina ny Didy navoakan'ny Fitsarana Tampony federaly mikasika ny Raposa Serra do Sol, hanavotana ny hajan'ny vahoaka indizeny, ary hanamafisana ny demaokirasia manaja ny hevitra samihafa sy ny fanjakana demaokiratikan'i Brezila.
Tamin'ny lahatsoratra mandresy lahatra iray no namintinan'i Sakamoto [pt] ny fandokondokoan'ny fampahalalambaovao sy ny mpilaza ny heviny ny adihevitra mafotaka amin'izao fotoana izao:
Nampivandravandra ny tsi-fahalalana ankehitriny ny adihevitra. Naheno mpanao gazety aho niteny “fandrarana” (ny fampiasana ny) tany mitovy velarana amin'ny firenen'i Sergipe ho ana mponina indizeny anarivony monja, miohatra amin'ireo tantsaha tsy manana tany iasana izay manantena fanajariana ny tany. Voalohany aloha dia fahadisoana ny mampitaha kolontsaina tsy misy ifandraisany. Mpihaza ny Indiana ka mila velarana lehibe izy hanaovany izany, raha nisafidy ny vokatra voaodin'orinasa aranty eny amin'ny talantalan'ny tranombarotra lehibe kosa isika. Tsy tenenina ny taom-pamboleny (ny taom-piotazany) sy ny toerana masiny. Arytsy sakana ho amin'ny fampanjariana ny tany velively ny tany arovana ho an'ny indizeny eto Brezila. Fantatsika fa any amin'ny sehatry ny politika no itoeran'ny olana fa tsy any amin'ny mahaolona velively.
Sakamoto [pt] indray mamarana azy amin'ny esoeso kely, tamin'ny filazany fa tany Brezila dia “Natakalo biby fiompy mandrakariva ny Indiana noho ny fanohanana sy firaisana tsikombakomban'ny fiarahamonim-pirenena”:
Maty misy mamono matetika ny Indiana. Tahaka ny niovan'ny hazo ho hazo fisaka. Ary tsy misy te-hahalala izany satria tsy mahaliana antsika izany ny tena marina. Avelao hitohy tahaka ny mahazatra ny fiainana e: isika miaraka amin'ny tany arovana tsy misy olona, ny vahiny amin'ny latabany mafonja, feno hena sy saozaha moravidy, ny tompontany miaraka amin'ny tany midadasikany, ny mpanao politika mitsangatsangana any Angra ary ny mpiasa amin'ny asany tsizarizary. Nahoana isika no tokony ho liana amin'ny fiainan'ny vondrona Indiana, voatositosika etsy sy eroa, voasazy noho ny fikasana hanohintohina ny filaminan'ny firenena?
Eo ho eo amin'ny 11% amin'ny velarantanin'i Brezila sy manakaiky ny 22%n'i Amazonia no eo ampelatanan'ny Indiana. Nanambara ny Lalampanorenana Breziliana tamin'ny 1988 fa ny tsy maintsy tafaverina amin'ny fokony ao anatin'ny dimy taona ny tanindrazan'ny Indiana.